आफैँ उत्पादन गरेर खाऔँ न, लफडा नै साफ ! – Nepali Digital Newspaper
आफैँ उत्पादन गरेर खाऔँ न, लफडा नै साफ !
■ डा. सुन्दरमणि दीक्षित
घटना र विचार, न्युज डेस्क ! 11 months ago July 14, 2019
० डाक्टरसा’प, सरकारका निर्णयहरूको प्रायः विरोध गरिरहनुहुन्छ, तपाईंं प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति पूर्वाग्रह राख्नुहुन्छ हो ?
० तपाईंको विचारमा के काम गऱ्यो भने ‘सरकारले काम गऱ्यो है’ भन्ने अवस्था आउला ?
– यसबारे सबै कुरा त खुलस्त गर्न नमिल्ला, तर प्रधानमन्त्रीले हाम्रा कुरा धैर्यसाथ सुन्नुभयो । सरकारलाई विप्लवजीका गतिविधिबारे पर्याप्त जानकारी रहेको, उहाँहरू को कहाँ छन्, के गरिरहेछन् भन्ने सबै रिपोर्ट सुरक्षा निकायलाई प्राप्त भइरहेको दाबी गर्ने उहाँले सरकारसँग अविलम्ब वार्ता गर्न विप्लवहरूले अग्रसरता देखाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । यही सन्देश पुऱ्याइदिन आग्रह गर्नुभयो । विप्लवको पार्टीका नेतृत्वमाथि कुनै किसिमको हानि नपुऱ्याउन आफूले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको खुलासा पनि उहाँले गर्नुभयो र वार्तामा चाँडो नआउँदा विभिन्न दुर्घटना निम्तिन सक्ने आशङ्का पनि प्रकट गर्नुभयो । विस्फोटलगायतका विध्वंशात्मक गतिविधिचाहिँ पूरै बन्द गर्नुपर्ने आग्रह पनि ओलीजीको रह्यो ।
– राष्ट्रवादी बन्न भारतको विरोध गर्नैपर्ने परम्परा जो छ, यसमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ । यताबाट पठाइने सामानमा उताबाट चेक गरिन्छ भने उताबाट आउनेमा पनि आफूले गर्नुपऱ्योयो नि ! डफ्फाका डफ्फा लिई विदेश भ्रमण गरर लाखौँ खर्च गर्ने, उच्च ओहोदावालहरूलाई करोडौँको गाडी, हेलिकोप्टर किन्न सक्ने, कमिसनकै लागि अर्बौंको विमान किनेर रुट नपाई त्यसै थन्क्याउन सक्ने, तर दुई–चार करोड खर्च गरेर विषादी परीक्षणको ल्याब्रोटरी खोल्न नसक्ने, अनि फलानोले विष पठायो, मार्न लाग्यो भनेर गाली गर्ने ? त्यो मोदी या कुनै लालुप्रसादले पठाएको त होइन नि ! व्यवसायीले उत्पादन गर्छ, व्यापारीले पठाउँछ, यताका व्यापारीले खरिद गरेर ल्याउँछन् । यो व्यापारको कुरा हो । नाकामा रोकिदिएपछि दुवैतर्फका व्यापारीले दुवैतिर दबाब दिए । रोकिएको सामान पुनः चालू भयो । छोटोमा बुझ्नुपर्दा कुरा यत्ति हो । यसमा विरोध गर्नेहरू आफ्नै अर्गानिक खेतीतर्फ लाग्नुपऱ्यो, खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न छोड्नुपऱ्यो । यसका लागि सरकारले पनि स्पष्ट नीति लागू गर्नुपऱ्यो । भारतबाट खाद्य–सामग्री, तरकारी र फलफूल झिकाउने ? आफ्नै उत्पादन गरेर खाऔँ न ! त्यताको खरिद नगरेर त्यतै सडाइदिऔँ र हाम्रो शक्ति देखाइदिऊँ न ! लफडा नै साफ !